တရုတ်စိတ်ကြိုက်ရေစိုခံပေးစက်၊ စက်ရုံ - Dongguan Fannuo Plastic hardware CO.LTD
နေအိမ် > အခြားထုတ်ကုန်များ အခြားထုတ်ကုန်များ > ရေစိုခံ Power Strip
IPX4 ရေစိုခံကာကွယ်နိုင်သောရေထုကာကွယ်ခြင်းပါဝါကြိုး - အိမ်တွင်းနှင့်အပြင်ဘက်တွင်အသုံးပြုခြင်း၊ ရေတိုခြင်းသို့မဟုတ်ရေမှုတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေရေမှုတ်ခြင်း (သို့) ရေချိုးခန်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအခြားလုံခြုံရေးပြsafetyနာများကိုကာကွယ်ခြင်း၊ အတွင်းအပြင်တွင်အပြင်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ရေဖြင့်။
IPX4 ရေစိုခံကာကွယ်နိုင်သောဓာတ်အားပေးစက်ပါဝါအစင်း:အိမ်တွင်းနှင့်အပြင်ဘက်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်၊ တိုတောင်းသော circuit သို့မဟုတ် electrics shock နှင့်ရေမှုတ်ခြင်း (သို့) ရေချိုးခန်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောအခြားလုံခြုံရေးပြissuesနာများကိုတားဆီးနိုင်သည်။ ၎င်း၏ထူးခြားသောရေစိုခံပစ္စည်းများမှတဆင့်၎င်းထွက်ပေါက်သည်ရေနှင့်ထိတွေ့တိုင်းလျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေသည်။
Power Plug အမျိုးအစား
B အမျိုးအစား - ၃ pin (မြောက်အမေရိက)
125V ~ 12A 1875W
Master ဖွင့် / ပိတ်ခလုတ်
4 AC ဆိုင်များ
14AWG / 6ft ပါဝါကြိုး
12 amp circuit ကိုအနိုင်အထက်
·4AC ဆိုင်များ Water Resistant Power Strip:4AC-outlets and socket electric shockproof overload protection,6ft cable power an entire workstation or home entertainment center. Input: AC 1875W.
· Electric Shock Proof ကိုတားဆီးပါ။ သင်၏လက်ချောင်းသို့မဟုတ်သော့သို့မဟုတ် pinzee (အမေရိကန်မဟုတ်သော standard plug) ကဲ့သို့သောသတ္တုစပယ်ယာတစ်ခုအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြည့်တင်းထဲသို့ထည့်သောအခါ၊ ဤသည်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံခြုံမှုကိုသေချာစေရန်လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ကိုထိရောက်စွာကာကွယ်နိုင်သည်။
· Waterproof မိုးလုံလေလုံ Power Strip surge protector သည်ကလေးငယ်များအတွက်သဟဇာတဖြစ်ပြီးသင့်၏အပူပေးမှုမှကာကွယ်သောအထူးအင်္ဂါရပ်များလည်းရှိသည်။ များသောအားဖြင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်လေ့ရှိသောပုံမှန် power outlet များနှင့်မတူဘဲ၊ ဤ power strip သည်ယေဘုယျအားဖြင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအခြေအနေများနှင့်မရင်ဆိုင်ရဘဲကောင်းစွာလည်ပတ်စွာအလုပ်လုပ်သည်။
· ETL အသိအမှတ်ပြုရေစိုခံနိုင်သည့်မိုးလုံလေလုံ / ပြင်ပပါဝါချောင်း၊ ဖော်ရွေသောဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှု။
· IPX4 ရေစိုခံကာကွယ်နိုင်သောဓာတ်အားပေးစက်ပါဝါအစင်း: Can be use indoors or outdoor, prevent short circuit or electrics shock and other safety issues caused by water splash or shower. Through its unique waterproof material, this outlet ensures minimizing the flow of electricity everytime it comes in contact with water.
·4AC ဆိုင်များ Water Resistant Power Strip:4AC-outlets and socket electric shockproof overload protection,6 ft cable power an entire workstation or home entertainment center. Input: AC 1875W.
· ETL အသိအမှတ်ပြုရေစိုခံအိမ်တွင်းနှင့်ပြင်ပစွမ်းအင်ချွေတာခြင်း၊ ဒီအဆင့်မြှင့်ထုတ်ကုန်ကိုအမေရိကန်ပလပ်အားလုံးသက်ဆိုင်သည်။
Power Strip Surge Protector ရေစိုခံ
ရေ - ခံနိုင်ရည်ရှိသော၊ ရှော့ခ် - အခမဲ့၊ လျှပ်စစ်အားတိုသော၊ overload overtect, စိုစွတ်သော / စိုစွတ်မှုအခြေအနေကိုလျှောက်ထားခြင်း၊
ပြင်ပမှလျှောက်လွှာများ၊ IPX4 စက်မှုစံချိန်စံညွှန်းများ
သင်၏မိသားစုကိုလျှပ်ကူးဘေးအန္တရာယ်များမှကာကွယ် ပေး၍ Wet Circuits မှအသုံး ၀ င ်၍ ထိရောက်သောရေခံနိုင်ရည်ရှိသည့် Strip ကိုအသုံးပြုပါ။
Power Strip သည်အစိုဓာတ်နှင့်ထိတွေ့လျှင်ပင်သင်၏စက်ကိုဆက်လက်အလုပ်လုပ်စေလိမ့်မည်။
A: ကျွန်ုပ်တို့သည် ID / ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်း၊ PCBA ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှု၊ မှိုဆေးထိုးခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ODM / OEM များကိုထောက်ပံ့နိုင်သည်
Hot Tags: ရေစိုခံ Power Strip, တရုတ်, စိတ်ကြိုက်, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, ထုတ်လုပ်သူ